Hike Spy App - Track and Monitor Hike Messenger Chat kanye nezingcingo Vidoe
Hike Spy App - Hlola Imilayezo Yombhalo namavidiyo ku-Hike
Ukunyakaza kuyisimo sohlelo lokusebenza lwe-Messaging Instant okuvumela abasebenzisi be-Smartphones ukuba baxoxe nabantu emhlabeni jikelele ngendlela elula futhi esheshayo. I-TheneneSpy ikuvumela ukuba ulandelele yonke ingxoxo kanye nezingcingo zevidiyo ezenziwe ngalesi sithunywa.
Gada Izingcingo Zombhalo Nezingcingo Nge-Hike Spy App
The Hlola ku-Hike isici siyatholakala ku- Amadivaysi e-Android axhunyiwe namadivayisi we-iOS aphukile ne-akhawunti esebenzayo ye-Hike Messenger ehlelwe. Lokhu kwenza umsebenzisi afunde imilayezo yombhalo eyithunyelwe noma eyamukelwe kusuka kubantu ngabanye noma ngamaqembu. Amafayela womidiya okwabiwe afaka phakathi izithombe, amavidiyo, nezitifiketi nazo zingalandelwa ngendlela elula.
I-TheOneSpy ku-Hike App ikuvumela ukuba:
Funda imiyalezo engenayo nephumayo
Landela iqembu izingxoxo
Hlola izithombe namavidiyo abiwe ku-Hike
Gcina izingxoxo namafayela abezindaba kwi-akhawunti ye-intanethi
Indlela Yokuhlola Inkulumo Yokuzulazula ku-Android Cell Ucingo nge-TOS Hike Spy?
Okokuqala, udinga ukubhalisa futhi faka uhlelo lokusebenza lwe-TOS Hike Spy kudivayisi ehlongozwayo okufanele ixoshwe noma i-Jail-iphukile. Ngemva kokufakwa, uhlelo lokusebenza luzoqala ukulayisha Ukumemezela imilayezo namafayela abezindaba kwi-akhawunti yakho ye-intanethi kusuka lapho unga khona finyelela kubo nganoma yisiphi isikhathi futhi noma kuphi nge uxhumano lwe-intanethi.
Khetha ilogi ye-Hike Chat kusuka phezulu ngakwesokudla kweminye imenyu bese uhlola imininingwane ingxoxo yombhalo nezingxoxo zomsebenzisi wakho we-Hike ohlosiwe.
Yimaphi Amandla Okuqapha Amandla Sinikeza ngeHike Spy App?
Kungani Khetha i-TOS Hike Messenger Spy App?
Ukuba ngumzali, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi yikuphi nokuthi ubani wakho izingane zixhumana ngokuhamba ama-social media kanye nezinhlelo zokusebenza zokuthumela imiyalezo esheshayo. Bangase babelane ngezithombe zabo siqu, amavidiyo noma ulwazi oluyimfihlo olungaziwa, noma bangase bahlukumezwe ngumuntu. Nge I-TOS inyuke uhlelo lokusebenza lwe-spy, awukwazi nje ukuqinisekisa ukuphepha kwezingane zakho kodwa futhi ukulandelela ukuxhumana ukuhamba womngane wakho oshadile nabasebenzi bakho.
4 ngokusekelwe ku 7 amavoti